Iindlela ezili-10 zokunyusa ukujonga iphepha kunye nesiCwangciso sakho soMxholo | Martech Zone
Iindlela ezili-10 zokunyusa ukujonga iphepha kunye nesiCwangciso sakho soMxholo
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 2, 2015 Douglas Karr
Ingcebiso elungileyo ayiphelelwa lixesha njengolwazi olukule infographic. UDiana Adams weBitRebels ubeke uluhlu Iindlela ezili-10 zokuGqithisela ukujonga kwamaphepha kwiZithuba zakho kwaye Ukujonga ngoku uyiguqulele kwi-infographic entle.
Thumela umxholo olungileyo rhoqo (ewe, ndiyazi ukuba besimkile ngexesha leeholide).
Yenza iiposti zakho zabelane - siyathanda Ukwabelana ngokulula kweNtlalontle kwiWordPress!
Sebenzisa izixhobo zoYilo loMxholo -Sinezilumkiso zokuseta izihloko ezininzi nge Meltwater kwaye sibuthanda ngokwenene ubunzulu kunye nexesha elifanelekileyo lolwazi esiya kuthi sabelane ngalo.
Yamkela ababhali beendwendwe - kodwa LUMKA!
I-SEO-ukuSebenzisa iiNjini zoPhando kusabalulekile kodwa ungalibali. Apha zi amanyathelo esiwathathayo ukuphucula izithuba zethu.
Hlela kwaye uQinisekise onke amagama ngaphambi kokuba upapashwe - Yhu… siyasilela apha. Ndinee doozies ezimbalwa kwiposti yam yokugqibela endiyilungisileyo. Sikhe satya ngombono wokuba nomhleli, mhlawumbi kulo nyaka!
Ikhonkco lokwakha (kodwa hayi indlela ocinga ngayo) -ndiyalithanda igama Ungeniso lokuqhagamshela ku Amaqhinga eSiza. Baxoxa ngamakhonkco afanelekileyo angaphakathi ukuqhuba ukujonga okungakumbi kwephepha-siyathanda IiJetpack ukusebenza kwezithuba ezinxulumene noko!
Ukuthengisa nge-imeyile iNdlela eyiyo -Kungoko sakha sasebenzisa I-CircuPress!
Hlukana nePosi ende -Sidinga ukwenza okungaphezulu kwezi kodwa ndiza kunyaniseka, ndiyawathiya amanqaku angama-10 + acofa nje ukujonga iphepha kunye nokucaphukisa abafundi bakho.
Sebenzisa iMidiya yoLuntu ngokuyilayo -Ukuba besinexesha elininzi, ngokuqinisekileyo besiza kusebenza kwimifanekiso ebonakalisiweyo ebonisa iiposti zethu kwaye sisebenzise indawo nganye elungileyo.
tags: ulungiselelo lweblogiizithuba blogisetyhulaumxholo wekharityhulamAmaqhosha okwabelana ngokulula eluntwiniemail Marketingababhali beendwendweyandisa ukujonga iphephaukwakha ikhonkcoiiposti ezindeUbungakanani beposiamanqaku ahambelanaSEOekwabelwana ngayoImidiya yokuncokola
Ngaba i-Facebook ithelekisa ne-LinkedIn yoNxibelelwano lweShishini?
Kutheni le nto ii-infographics ziyinto eyiNtloko kwiNtengiso yeKhontenti
Ngomhla wama-1 ku-Disemba 2015 ngo-8: 06 AM
Le infographic entle ngokwenene. Enkosi ngokwabelana ngayo noDoug!
Ngokwazi kwam kukho iindlela ezimbini zokunyusa ukujonga iphepha kwiwebhusayithi:
Indlela ebanzi (ukufumana iindwendwe ezintsha).
Indlela ebanzi: ukuhenda abafundi abakhoyo ukuba bafunde ngakumbi (ukuphucula ukujongwa kwephepha / iseshoni
Sitshanje ipapashe isithuba egxile "kwindlela enzulu", equlathe iingcebiso ezinokusetyenziswa.
Ndicinga ukuba kufuneka ndiliguqule eli nqaku libe yimbonakalo. 🙂
Ngomhla wama-1 ku-Disemba 2015 ngo-8: 28 AM
Ndicinga ukuba ngumxholo ofanelekileyo we-infographic, iTamas!